Ra'iisul Wasaare Rooble oo dib ugu soo laabtay dalka | KEYDMEDIA ONLINE
Ra’iisul Wasaare Rooble oo dib ugu soo laabtay dalka
Sii-hayaha Xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa xilligii afurka ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa gabal-dhicii galabta dib ugu soo laabtay dalka, kadib maalmo uu ku maqnaa dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya.
Maxamed Xuseen Rooble, ayaa 7 May 2021, ka ambabaxay dalka, wuxuuna waddanka Sacuudiga u tagay arrimo la xariira Cumreysi, intii uu ku sugnaa magaalada Maka Al Mukarama, wuxuu kulamo la qaatay xubno sarsare oo ka tirsan Boqortooyada Sacuudiga.
Waftiga Rooble ee dhawaan dib ugu soo laabtay Caasimadda dalka ee Muqdisho, waxana soo dhaweeyay Wasiirka Caddaaladda Abdulkadir Mohamed Nuur “Jaamac” , Xoghayaha Joogtada ee Xafiiska Ra’isul Wasaaraha iyo masuuliyiin kale.
Rooble, ayaa looga fadhiyaa hirgalinta dorashooyin loo dhan yahay oo si deg deg kaga dhaca dalka, Madaxweynaha Waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaana ku wareejiyay hoggaanka doorashooyinka.
Golaha Midowga Musharixiinta, Madaxda Maamullada, Wakiillada Beesha Caalamka iyo guud ahaan Shacabka Soomaaliyeed, ayaa si weyn u soo dhaweeyay in RW uu qaato doorkiisa doorashada, waxaana loo ballan qaaday in lala shaqeyn doono.